Mividianana vovoka Methandrostenolone (72-63-9) Mpanamboatra & trano
Rano Methandrostenolone (Dianabol) dia iray amin'ireo steroides androgenic-anabolic izay manana laza malaza eo amin'ireo atleta sy mpandidy zavakanto manerana izao tontolo izao. Ny fampiasana azy ho an'ny fananana ara-batana sy ara-birao no mahatonga azy io ho malaza.
Rano Methandrostenolone (Dianabol) vovoka (72-63-9) video
Rano Methandrostenolone (Dianabol) vovoka (72-63-9) Description
Ny vovobony roahin'ny Methandrostenolone (Dianabol) dia steroid anabolic oral. Ho an'ny bodybuilders, mba hitarika ny fitombon'ny muscle sy ny fitomboan'ny habeny, ny vatan'ny metabolisma dia tsy maintsy misy amin'ny fotoana rehetra ambony, ity steroïda ity dia manatsara tanteraka amin'ny alalan'ity fanampiny ity. Ny rantsana mivaingana ao amin'ny fanafody Dianabol sy ny tablette izay ny Raw Dianabol dia vita haingana mba hamoronana tontolo iainana anabolika ao amin'ny vatan'olombelona izay mampiroborobo ny asa aman-draharaha.
Ny Dianabol koa dia manatsara ny fitehirizana azota amin'ny vatan'ny tazomoka ao amin'ny vatany. Izany dia manatsara ny habetsan'ny proteinina izay azo amarinin'ny vatanao amin'ny fotoana rehetra, ka mahatonga ny fitombon'ny elanelana sy tanjaka hozatra.
Ankoatra izany, ny Dianabol dia manala tanteraka ny fahatsapana reraka mety hitranga mandritra ny fampihetseham-pandaminana. Dianabol koa dia aseho amin'ny fampitomboana ny kalsioma amin'ny vatany. Ny vokatr'izany dia ny calcium bebe kokoa dia napetraka ao amin'ny taolana ary mitombo hatrany ny tanjaka ara-batana sy ny toetrany.
Rano Methandrostenolone (Dianabol) vovoka (72-63-9) Specifications
Product Name Rano Methandrostenolone (Dianabol)
Anarana simika Metandienone; Dianabol; Metanabol
molekiolan'ny Formula C20H28O2
molekiolan'ny Wvalo 300.43512
mitsonika Point 165-166 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 3-6 ora
Color Fotsy hoditra fotsy fotsy fotsy
Solubility Mazava ho azy fa tsy maloto amin'ny rano
Application Namboarina ho fampiroboroboana ny atidoha sy ny atleta
Inona no atao hoe vovobony Raw Methandrostenolone (Dianabol) (72-63-9)?
Ankoatra izany, ny Dianabol dia manala tanteraka ny fahatsapana reraka mety hitranga mandritra ny fampiharana ara-dalàna. Dianabol koa dia aseho amin'ny fampitomboana ny kalsioma amin'ny vatany. Ny vokatr'izany dia ny calcium bebe kokoa dia napetraka ao amin'ny taolana ary mitombo hatrany ny tanjaka ara-batana sy ny toetrany.
Ahoana ny fomba famonoana rongony Methandrostenolone (Dianabol) (72-63-9) asa
Dianabol dia miasa amin'ny fomba samihafa mba hanampiana ny fitomboan'ny haizin'ny haavo, ary ny iray amin'izy ireo dia mampitombo ny famokarana proteinina.
Izany dia manampy amin'ny famoronana voina vaovao ary manamboatra haingana ny vatana. Izany, amin'izay, dia manome valiny azo jerena haingana kokoa! Ny fomba iray hafa dia manampy ny vatana i Dbol amin'ny fampitomboana ny fihazonana azota.
Arakaraky ny nitrogen ny vatanao dia ahitana ny lava indrindra azonao ambolena! Dianabol koa dia manampy ny vatantsika hampiasa kômibria izay handevonantsika tsaratsara kokoa. Izany dia manatsara ny haavon'ny angovo azonay ary manome fahafahana anao hivoatra kokoa ao amin'ny gym!
Rano Methandrostenolone (Dianabol) vovoka (72-63-9) Dosage
Dianabol dosage ho an'ny mpandray anjara
Raha ampiasain'ny Dianabol ho anao voalohany indrindra, ny dosage nomena dia eo anelanelan'ny 15mg-30mg isan'andro ho an'ny mpandray anjara. Azo atao tsara ny manomboka amin'ny fakana 15mg isanandro satria ny roa herinandro roa farafahakeliny dia ampitomboina amin'ny 30mg isan'andro isaky ny telo herinandro farany.
Ny sombin-tsakafo mandritra ny andro dia asaina koa noho ny antsasaky ny Dianabol. Midika izany fa mandray ny antsasaky ny dosage amin'ny maraina ary mandray ny antsasany hafa amin'ny tolakandro.
Dianabol dosage ho an'ny mpiseraseran'ny mpampiasa
Taorian'ny dingana voalohany amin'ny herinandro 6-herinandro momba ny dosia Dianabol, dia mety hihevitra ianao fa hampitombo ny dosage amin'ny dosage afangaro. Amin'ity dosage ity dia afaka manomboka amin'ny 30-50mg isan'andro. Tokony manomboka amin'ny fametrahana 30mg isan'andro ianao amin'ny fiandohan'ny tsingerinao ary mandroso mankany amin'ny 50m isan'andro isaky ny faran'ny vanim-potoana.
Fampiasana Dianabol ho an'ireo mpampiasa misandratra
Olona maro no hifikitra amin'ny dosage 50mg, na dia mahatratra ny haavon'ny Dianabol aza izy ireo. Na izany aza, ny mpisera vitsivitsy sasany dia mety hampakatra ny dosages hatramin'ny 75mg isan'andro. Tokony hojerenao fa ny dosage toy izany dia ho an'ireo mpampiasa za-draharaha satria mety hampitombo ny fahombiazan'ny Dianabol hafa.
Dianabol dosage ho an'ny vehivavy
Vehivavy marobe mandray an'i Dianabol hitady tanjaka androgenic. Na izany aza, mety misy fiantraikany hafa ny fiovan'ny feo, ny fitomboan'ny volo sy ny akne amin'ny hafa. Mety hiteraka tsingerim-bolana tsy mety koa izany. Vokatr'izany dia nomena torolàlana ny vehivavy mba hampakatra dosie ambany ho an'ny Dianabol mba hampihenana ny vintana amin'ny vokatra hafa. Miankina amin'ny toeran'ny vehivavy sy ny tanjon'izy ireo, ny dosage ho azy dia mety mihatra eo amin'ny 5mg-20mg.
Rano Methandrostenolone (Dianabol) (poids 72-63-9)
Amin'ny maha-steroid ny ratra, ireo mpampiasa Dianabol dia tsy mila entina. Izany koa dia manampy ireo mpampiasa mba hitantana mora foana ny dosage. Ho an'ireo izay tia mikotrika, misy ihany koa ny vahaolana manapotipotika amin'ity steroid ity, izay mahatonga azy ho tsara ho an'ny tiany samihafa.
Arovy ny rivotra
Ho an'ny fitomboan'ny hozatra skeleta dia mitana toerana lehibe ny azota. Ny vatana dia mila manana habetsaky ny habetsin'ny azota mba hahazoana fanorenana fanamboaram-bozaka mahomby.
Manatsara ny dingan'ny glycogenesis koa ny Dianabol. Ny dingan'ny glycogenesis dia ny famongorana ny glycogène amin'ny glucose. Izany dia mampitombo ny haavon'ny glucose ao amin'ny rafitra izay miteraka haavon'ny angovo ao amin'ny vatana.
Ampitomboy ny isan'ireo testosterone
Rehefa mitombo ny habetsan'ny testosterone ao amin'ny vatana dia mahazo tombontsoa maro mifandray amin'ity hormonina ity ny vatana. Tafiditra ao anatin'izany ny fampahaingana ny fotoana fanarenana aorian'ny fampiofanana, ny fampivoarana ny firaisana ara-nofo sy ny fitomboan'ny mozika.
Ny dianabol koa dia mampitombo ny tahan'ny vatan'ny sela ao amin'ny sela. Ny proteinina koa dia manana anjara lehibe amin'ny fananganana ny hozatra hatramin'ny fanoheran'izy ireo ny fananganana tranoben'ny protein n synthesis
Nampitombo ny famokarana sela mena
Ny Dianabol koa dia manatsara ny tahan'ny vatan'ny sela. Manampy amin'ny famatsiana oksizenina ao amin'ny vatana ny sela mena. Vokatr'izany, ny olona iray dia afaka manafika kokoa ny fampiendrehana sy ny faharetana mahery vaika.
Fampihenana ny reraka
Dianabol dia manana fahafahana hampihenana ny reraka mandritra ny traikefa. Izany dia vokatry ny fiakaran'ny testosteron ao amin'ny vatana. Vokatr'izany, afaka mampiofana henjana kokoa ny mpiserasera ary maharitra ela.
Fandrosoana goavana amin'ny hery sy tanjaka
Miaraka amin'ny Dianabol, azo atao ny manomboka mahazo ny 20-30lbs amin'ny hozatra mafy ao anatin'ny herinandro voalohany amin'ny herinandro 6-8. Ireo mpampiasa matihanina amin'ity steroid ity dia afaka mahazo valiny tsaratsara kokoa amin'ny vanim-potoana toy izany.
Fanampiana Dianabol iray hafa dia ny famaranana ny famaranana fohy. Ny ankamaroan'ny steroïde hafa dia mahafaoka famolavolana lava ho an'ny olona iray mba hahatanteraka ny valiny, miaraka amin'ny stacks Dianabol, ny cycles fohy amin'ny 4-6 herinandro dia mety hiteraka fiovana maromaro.
Miaraka amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny Dianabol, mora ho an'ny olona iray ho andriamanitra ny fitafy na ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy dia misy olana loatra. Mba hahazoana tanteraka ny tombontsoa avy amin'ny Dianabol dia mila mitandrina amin'ny fandaharam-potoana famaranana ny fiovan'ny toetrandro mba tsy hisorohana. Raha tsy izany, Dianabol dia afaka manome antoka ny vokatra tsara ho anao.
Buy Buy Methandrasolone (Dianabol) avy amin'ny Buyaas.com
Ny Torolàlana Farany ho an'ny Dianabol ho an'ny Bodybuilding
Taylor N. William, MD Anabolic Steroids sy ny Athlete, 2d ed, (2002); p.117Gerber Larry; Ny fahamarinana momba ny steroids, (2013) p.13
Frattasio Adam; Steroid Man: Fiaikenan'ny mpitondra hery avy amin'ny vanim-potoanan'ny Golden (2016). p.36, p.67, p.82, p.99
Shannon Knudsen; Mitsangàna eo, (2016) p.35
Thomas John A .; Ny zava-mahadomelina, ny atleta, ary ny fahombiazana ara-batana (2012), p.98.
Denera Tony; Miaraka amin'i Arnold: Mitsangana ny Girlie Man (2012),
Rano métandriol roanjato (521-10-8)